Cadceedda ayaa sharraxday sawir-qaade iyo koronto
Unugyada loo yaqaan 'Photovoltaic cells' ayaa qoraxda u beddelaya koronto Qolka sawir-qaadista (PV), oo badanaa loo yaqaanno unugga qorraxda, waa aalad aan farsamo-yaqaan ahayn oo iftiinka qorraxda toos ugu beddelaya koronto. Qaar ka mid ah unugyada PV waxay u rogi karaan iftiinka macmalka ah koronto. Fotonooyinku waxay qaadaan tamarta qoraxda Qorraxda waxay ka kooban tahay ...
Maxaad u aadeysaa sawir-qaadista?
Ereyga photovoltaics (PV) waxaa markii hore la sheegay qiyaastii 1890, wuxuuna ka yimid ereyada Griigga: sawir, 'phos,' oo macnaheedu yahay iftiin, iyo 'volt,' oo loola jeedo koronto. Photovoltaic, sidaa darteed, macnaheedu waa iftiin-koronto, oo sifeynaya si sax ah habka qalabka iyo aaladaha sawir-qaadista u shaqeeyaan. Sawir qaade ...
Waa maxay sawir qaatayaashu?
Photovoltaics waa ubadalka tooska ah ee iftiinka korantada heerka atamka. Qalabka qaar waxay soo bandhigaan hanti loo yaqaan 'photoelectric saamaynta' taas oo u keenta inay nuugaan fotonooyinka iftiinka oo ay sii daayaan elektaroonig. Marka elektaroonigyadan bilaashka ah la qabto, elektaroonig ...